On: Ike 23Author: haIge: A gam akporo, Cell ekwentị Nledo, Cell ekwentị Nledo kupọn, Cell ekwentị Ndepụta, Ọrụ nlekota oru, Wụnye Mobile Nledo, Nwata nu ay!, iPhone 5s Nledo Software, Ekwentị mkpanaaka nlekota oru, Mobile Nledo, Mobile Nledo Online, Nyochaa Internet-eji, Nne na Nna Control, Nledo Facebook ozi, Nledo N'ihi gam akporo, Nledo N'ihi iPhone, Nledo iMessage, inyocha Mobile ama, Nledo na Oku, Nledo na SMS, Nledo Skype, Nledo Viber, Nledo WhatsApp, Track GPS Location Ọ dịghị Comments
Ụmụaka, na obere na-etolite okenye, ar getting their sensible trendy smartphones with total access to the net and every one of that involves. A 10-calendar year-older by employing a sensible phone while not the requirement of any style of parent handle in position will promptly gain access to the planet wide net, ịkparịta ụka n'Ịntanet, mkparịta ụka ebe na ihe ndị ọzọ. Ha nwere ihu ọma nwere a Obere kọmputa, ma n'adịghị ka ha n'ụlọ PC ọ gaghị ekwe omume ọ na-achọ ha n'ubu na-a ego na ihe - ọ bụ?
E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche nke okenye jikwaa maka mkpànaka igwe na-adabere otú a otutu jisie ị kwesịrị ị na-enwe.
N'ihi na-eto eto, ihe ka ọtụtụ n'ime ole na e ji mara site na gị n'ụlọnga ma ọ bụ maara nke ọma ngwa ọdịnala nwere ike ịbụ ihe niile ị chọrọ. Aga m nakwa achọ a na omimi lee ihe na-nyere na kwara nlekota software omume. exactspy , nke kasị mma dị ọnụ ala price nledo ngwa maka ụmụaka.
– Tracks GPS ebe. Ịchọta na nyochaa ngagharị nke ọ bụla ekwentị! N'ezie na-Global debe usoro Idebe track nke, na ezi ihe nduzi iduzi ụzọ
– Oku Kwunyere. Ọ ga-adị mfe ịnụ mkparịta ụka sitekwara ebumnobi cell ekwentị.(Gam akporo os &amp; iOS mobile igwe)
– -Esi na aka na dekọọ. ndekọ na Monitors-akpọ na-akpọ si.
– Inbound cell ekwentị akpọ mmachi. Constrain ọ bụla nọmba maka inbound cell ekwentị oku.
– Na-aga site ederede. Na-anya na nile ederede ozi enwetara ma ọ bụ zipu site na ekwentị. Nledo na ederede ozi na exactspy
– Keylogger. mSpy keylogging e ji mara ga-ekwe ka ị na-amụ ihe nile ọ bụla gị ebumnobi n'ji faucets na ekwentị mkpanaaka.
– Cpanel. Mee ka obi ruo ohere nke nile ndekọ na ekwentị Ama na weebụ na ọ bụla site laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa
– Pụrụ ịdabere. 10-na-arụ ọrụ ụbọchị ego-azụ nkwa
– Ego oge. Nyochaa niile kalenda eme, njikere nzukọ na memos.
– Na-aga site ozi ịntanetị. Tracks na oku na abata na e-mail
– Nyochaa Online ojiji: nchọgharị akụkọ ihe mere eme, saịtị na ndokwa ibe, obstructs saịtị
– Intercept ngwa ngwa ozi: Skype nledo, WhatsApp nledo na fb nledo, Viber nledo na iMessage nledo
– Bugging. Ọ bụ ike akụkọ ihe mere eme gburugburu na exactspy
– N'Ime Ime Obodo akara. Ị kwesịrị inwe a handheld akara onwere a ekwentị na ndokwasa exactspy : a ụdị atụmatụ dị ka ngwaọrụ wipeout, anya ngwaọrụ igbochi ga-n'okpuru gị akara!
– Dịghị! Minor electric batrị oriri
– Stealth! Ga na-eji ederede ntụziaka na ike na-egosi na iche cell ekwentị, -ejide n'aka na nzuzo nke Idebe track nke
– Adaba! Nwere ike ijikwa isi cellphone ika aha na Sistemu eji arụ ọrụ: A gam akporo, iPhone cell igwe
Na exactspy- Protect Kids From Cell Phone Spy Free na ị ga-enwe ike:
Ị nwere ike Download :”Let&#8217;s Protect Kids From Cell Phone Spy Free“
Cell ekwentị nledo free ngwa, Cell ekwentị Nledo Free Download, Cell phone spy free for iphone, Cell phone spy free trial, Cell phone spy free without target phone, Cell ekwentị nledo software free, Cell ekwentị nledo na-enweghị ohere nwaa ekwentị free, Free ekwentị nledo ngwa n'ihi na android, Protect Kids From Cell Phone Spy Free